Momba anay | Xingtai Xinchi Rubber And Plastic Product Co., Ltd.
Tongasoa eto Xingtai Xinchi
Xingtai Xinchi Rubber And Plastic Product Co., Ltd. Any amin'ny faritanin'i Hebei no misy an'i Beijing. Tena mety ny fitaterana. Xingtai Xinchi ODM sy OEM izay manampahaizana manokana amin'ny famokarana karazana gasket amin'ny fitaovana isan-karazany toy ny vy, rubber, fibre composite sns, izay mety amin'ny famehezana lasantsy, diesel ary rano ho an'ny fiara, milina fananganana, mpamokatra sns. Miaraka amin'ny traikefa 20 taona mahery. Xingtai Xinchi dia nahazo laza tsara eran'izao tontolo izao tamin'ny alàlan'ny haitao sy ny toe-tsaina feno fanoloran-tena.
Ny orinasanay dia manana 4000 metatra toradroa, miaraka amina milina fanaovana volo vita amin'ny kofehy mandeha ho azy, milina fanaovana totohondry, tombo-kase NBR FKM ary fitaovana hafa mandroso. Vokatra isan-taona amin'ny vokatra tombo-kase isan-karazany 1 tapitrisa, Varotra amidy eran'izao tontolo izao. Ny foto-kevitray momba ny asa dia "Fahamarinana sy fahatokisana, vidim-piainana voalohany ary mpanjifa voalohany", izany no antony ahazoantsika ny fitokisan'ny mpanjifa anatiny sy vahiny!
Manaova fampandrosoana miaraka amin'ny voninahitra, kalitao mahazo fahatokisana.
Ny firaisana dia azo ampiharina, mpisava lalana ary manavao.
Mamorona fotoana ahafahan'ny mpiasa mamorona tombony ho an'ny mpanjifa ary harena ho an'ny fiarahamonina.
Fitantanana mifantoka amin'ny olona, ​​etika ara-pitondrantena ho an'ny orinasa, fampandrosoana maharitra.
Hevi-dehibe momba ny serivisy
Serivisy amin'ny serivisy amin'ny fo manontolo aloha.
Fomba fiasa miasa
Ny fomba fisainana dia manapa-kevitra, ny hevitra mahatratra ny ho avy, ny antsipiriany manapa-kevitra ny fahombiazana, ary ny toe-tsaina no manapaka ny zava-drehetra.
Ny vokatra lehibe dia ny kitapo fanamboarana motera feno motera, gasket lohan'ny varingarina, gasket fonosana valizy, tombo-kase vita amin'ny silipo fluorine, karazana gasket exhaust isan-karazany, gasket vilany solika, karazan-tsambo fiara samihafa, trano fonenana, boaty kit peratra sy ny hafa. Ary faly izahay ary vonona ny hamolavola kojakoja vaovao ho anao, mba hiantohana ny vokatra tsara indrindra ho anao, ny fizotran'ny famokarana rehetra dia ataon'ireo mpiasanay voaofana tsara ary arahan'ny maso akaiky tokoa. Manana Inspection QC izahay isaky ny dingana famokarana, miampy fisafoana farany alohan'ny famonosana.
Raha liana amin'ny vokatra sy serivisinay ianao dia aza misalasala mifandray aminay, misaotra indrindra!